आहा ! समृद्ध देश कहिले होला ? - Aaha Sanchar
२०७७ मंसिर २६, शुक्रबार १३:३९
करिव ३ वर्ष अगाडि स्मार्ट सिटिदेखी घर घर धारा लगायत विकास र सम्वृद्धिका कैयौ प्रतिबद्धताहरु भएका भए तर अब प्रतिवद्द्ताहरुमा घनिभुत ढंगले मुल्यांकन गर्ने बेला करिव करिव आएको छ । देशमा सरकार मात्र स्थिर भो । अन्य कुरा भने त उस्तै ! जुन हिसावले ब्रेकथ्रु छलाङ हुनुपर्ने हो, भैइराखेको छैन ।
विकास र सम्वृद्धी, सुशासन, रोजगार अनि भ्रष्टाचार इत्यादी अवस्थाहरुमा के कति प्रगती भए हामी अहिले नि आकलन गर्न सक्छौ । संविधानको कार्यान्वयनको अवस्थामा हो । कठिनाईहरु त पक्कै छन तर जुन हिसाबको चुनावता रौनकताहरु थिए, त्यो अहिले छैन।
माथी उल्लेख्य भएका कुराहरुमध्ये विकासमा केही सकारात्मक प्रगती भएपनी सारमा प्रगती निराशाजनक छ, त्यहा पनि कमसल विकास र भ्रष्टाचार उस्तै छ । सिमित व्यक्तिको मनोमानी, हैकमवादी प्रवृत्तिवाट जनता आजित भएका छन । नितिगत आर्थिक भ्रष्टाचार झन बढेको छ, सिद्धान्तमा मात्र असल शासन,वास्तविक सुशासन कायम हुन सकिरहेको छैन, हामी जनताले सरकारी कामकाजमा पाउने दुखमा भुक्तभुगी भएकै छौ ।
स्थायी सरकार आएपछि जनतामा एउटा ठूलो आशा थियो, यतिका दिनसम्म संक्रमणमा गुज्रीरहेका हामी जनता अब त देशमा केही हुन्छ कि भन्ने आशा थियो । जनतामाझ गरेका ती प्रतिबद्धताहरु के कति पूरा भए त्यसमा विश्लेषण हुँदै गर्ला । जुन हिसाबले सरकारको बारेमा सोचिएको थियो त्यो हिसाबले बिल्कुल अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । झन पछिल्लो ८र ९ महिनामा कोरोनाको निहुँ भईरहेको छ ।
भ्रष्टाचार, अनियमितता, दन्डहिनता, मनोमानी हरेक क्षेत्रमा उस्तै छ,जनप्रतिनिधि मार्सी चामलको भात खाईरहेका छन भने जनतालाई एक छाक भात पनि खान धौ भैइरहेको छ । जनतामा नैराश्यता छाईरहेको छ, ह्या यो सरकार पनि यस्तै रैछ भन्ने मनोभावको विकास जनतामा भैइरहेको छ । लाग्दैछ देशलाई एकदिन भ्रष्टाचारले देशलाई चुर्लुम्म डुबाउछ । यहाँ अरु कुरा सहायक देखिन्छ्न भने भ्रष्टाचार प्रमुख समस्याको रुपमा देखिन्छ ।
हालै ट्रान्सपरेन्सीको जनमत प्रतिवेदनअनुसार एशियामा सवैभन्दा भ्रष्टाचार गर्ने देश मध्ये पहिलो नम्बरमा आएपछी झन यसले वर्तमान अवस्था छर्लङ्ग बनाएको छ तर सरकारले यस प्रतिवेदनलाई ठाडै अस्विकार गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्रीले कहाँ छ भ्रष्टाचार भन्छन तर स्थानीय तहरुमा भ्रष्टाचारले चरम सीमा पार गरिरहेको छ ।
वर्तमान अवस्थामा आशा भन्दा निराशा धेरै छ । जनता वाक्कदिक्क छन। रोजगार छैन,ठुलाठालु पहुँचवालाहरु भने मौनमोजको जीन्दगी जिइरहेका छन । विकास अन्य विभिन्न आयोजनाका कामहरुमा सिमित वर्ग, व्यक्तिको हालिमुहाली छ । विचरा निरीह जनताहरु टुलुटुलु हेर्न वाहेक अरु के गर्न सक्छन । असन्तुस्टिहरुको सम्बोधन, रोजगारीमा वृद्धि, स्थानिय तहमा हुने विभिन्न विकास आयोजनामा सम्पुर्ण जनताको समान सहभागिताको सुनिश्चितता यावत थुप्रै विशेष समस्याहरुमा घनिभुत ढंगले छलफल गरेर जनतामा एकप्रकारको आशाका किरणहरु ल्याउन सकिन्थ्यो तर यी सव यहाँनेर भैइरहेका छैनन।
माथिबाट हेर्ने हो भने समस्याहरु सतही देखिन्छ्न तर यस्ता थुप्रै समस्याहरु विद्यमान छन जुन तल धरातिय कोणले हेर्ने हो भने जनतामा धेरै असन्तुष्टिहरु छन । हरेक तहमा हेर्ने हो भने शक्तिको चरम दुरुपयोग भैइरहेको छ । भ्रष्टाचार अन्त भएको खै ? खै रोजगार ? विकाश खै ? सुशासन खै ? यावत थुप्रै प्रश्नहरुमा प्रश्नवाचक चिन्ह लागिरहेका छन । काजतपत्र मिलाएर जनताको पैसा खाने प्रवृत्ती पनि हवात्तै बढिरहेका छ ।
नीति बनाउने सत्तासिन प्रतिनिधिहरुको हो अनि त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरुको हो तर उनिहरु पनि पाटे अल्छि भएका छन,नेताहरुको चाकरी मात्र गरेको देखिन्छ । सरकारी स्तरबाट नियमन छैन,भएपनी भालेको मासु र रक्सीमा बिकिदिन्छन नियमनकारीहरु । र काम पनि ठुलाठालुहरुकै गरिदिन्छन । अन्तिममा घुमिफिरी मारमा पर्ने भनेको साधारण जनता नै हुन। वास्तविक धरातलको नियती यस्तो छ तर माथी सत्ताका भुक्तभोगीहरु केही समस्या छैन जस्तो गरि अभिनय गरिरहेका छन।
विगतमा अस्थिर सरकारवाट वाक्क दिक्क भएका हामी जनताहरु जब देशमा स्थायी सरकारको कुरा आयो, हर्षित भएका थियौ वा अब देशमा कायपलट हुने भो भन्दै नाचेका थियौ । आहा ! यस्तो लाग्थ्यो ,सरसर हर कुरा स्मार्ट, स्मार्ट्नेशका भव्य आशाहरु, विकास र समृद्धिका गगनचुम्बि सपनाहरु थिए तर खै ३ वर्ष भईसक्यो लाग्थ्यो तर अब लाग्दैछ सरकार नि यस्तै त रैछ । यो व्यवस्था नै खराव हो कि शासन पात्रहरुको नियत नै खराव भएको हो? प्रश्न यहाँनेर उठ्छ ।
यी सब कुराहरु सुन्दा, देख्दा र आफुमा आईपर्दा वाक्क दिक्क लाग्छ । मेरो देश भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त र आहा समृद्ध देश कहिले होला ? यस्तै कुराले बार बार पिरोलिरहन्छ । हुनत सत्ताका भुक्तभोगिहरुलाई जति चिच्याएनी, कराएनी के फरक पर्दछ र किनकी उनीहरु सत्ताको नवरात्री समागममा लिप्त भएका छन । कसैले जे भने नि फरक पर्दैन र पर्नेवाला नि छैन । जयदेश ! जयसम्वृद्धी !